Apple inoenderera mberi nekubvisa zvikumbiro pakukumbira kwehurumende yeChinese | IPhone nhau
Apple inoramba ichibvisa maapplication pachikumbiro chehurumende yeChinese
Kubviswa kwezvikumbiro kubva kuChina App Store, pakukumbirwa nehurumende, kwakaguma kwenguva refu kuve nhau. Kazhinji, hurumende yenyika inoda kubviswa kwezvikumbiro zviri zvezvimwe zvikamu, pane kuita zvikumbiro zvakasiyana.
Nekudaro, nhau dzichangoburwa dzine chekuita nekutonga kwehurumende yeChinese pamusoro peApp Store, inokwezva zvakanyanya, nekuti iri basa chairo. Ndiri kutaura nezve iyo Quran Majeed Pro app izvo inobvumira vashandisi kuverenga nekuteerera iyo Korani.
Kubviswa kwechikumbiro ichi kwakaziviswa kuburikidza neApple Censorship, webhusaiti inoitisa tarisa mafambiro ehurumende yeChinese muApp Store
BBC News ndakaonana nevakagadziri veapp, Pakistan Data Management Services, iyo inoti:
Sekureva kwaApple, app yedu yeQuran Majjed Pro yakabviswa kubva kuChina App Store nekuti iine zvirimo zvisiri pamutemo.
Tiri kuedza kubata neChina Cyberspace Administration pamwe nevakuru veChina kuti vagadzirise nyaya iyi.
Icho chikonzero hachisi pachena, nekuti hurumende yeChinese inoona Islam sechitendero. Zvingangodaro, iyo China Cyberspace Administration inofunga kuti kunyorera kune zvinyorwa zvisiri pamutemo zvechitendero maererano nehurumende.
Iyo Koran Majeed Pro kunyorera kwave pamudyandigere chete kubva kuChinese App Store uye inoramba ichiwanikwa kune dzimwe nyika, kusanganisira Spanish App Store, kupi iko kunyorera kuri mutengo pa14,99 euros.
Quran Majeed Pro inowanikwa ye iPhone, iPad uye Apple Watch uye inokutendera iwe kuti uverenge uye uteerere kune yakazara zvinyorwa zveQurani kuburikidza nevanoverengeka vanoverengeka pasi, sezvatinogona kuverenga mune tsananguro yekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inoramba ichibvisa maapplication pachikumbiro chehurumende yeChinese
Apple Watch Series 7: hombe, yakasimba, yakawanda yakafanana
Apple inoshandira nyowani software mukuru kuti ape simba nyowani nyowani yePambaPods